Voasambotry ny polisy frantsay i Félicien Kabuga, heverina ho mpamatsy vola ny fandripaham-bahoaka tao Rwanda · Global Voices teny Malagasy
Nanana anaram-piafenana miisa 28 i Kabuga nandritra ny fandosirany
Voadika ny 16 Jona 2020 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, Español, Ελληνικά, Deutsch, 日本語, Nederlands, Français
Tsangambato fahatsiarovana ny fandripaham-bahoaka tao Rwanda. Saripika avy amin'ny The Advocacy Project, nampiasaina araka ny lisansa CC BY-NC-SA 2.0
Voasambotra tao amin'ny tanàna itatra pariziana tamin'ny 16 mey 2020, rehefa niafina nandritra ny 26 taona i Félicien Kabuga, voampanga ho nanao fandripaham-bahoaka tao Rwanda. Avy eo izy nafindra tany amin'ny Fitsaraha Heloka Bevava Iraisampirenena misahana an'i Rwanda.
Iray amin'ireo olo-nandositra nokarohina fatratra indrindra teto ambonin'ny tany i Félicien Kabuga, izay 84 taona amin'izao fotoana izao. Nanambara hanolotra valisoa 5 tapitrisa dôlara amerikana ny departemantam-panjakana ao Etazonia ho an'izay manome torohay ahafahana misambotra azy. Rehefa nanao ara-kiafina tamin'ny polisin'ny firenen-tsamihafa hialany amin'ny vesatra maro iampangana azy ny lehilahy, dia voasambotra ihany tamin'ny 16 mey lasa teo, tao Asnières-sur-Seine, tanàna itatra ao Paris.
Faniriany raha tao Frantsa ihany izy no notsaraina, saingy nanapa-kevitra ny fitsarana frantsay ny hamindra azy ho any Tanzania, any amin'ny Tribonalin-Keloka Bevava Iraisampirenena (IRMCT) tamin'ny 3 Jona. Kabuga ino voampanga ho mpanome vola tamin'ny fandripaham-bahoaka taona 1994 tany Rwanda, — fotoana naharitra 100 andro namonoan'ny mahery fihetsika Hutu olona efa manakaiky ny 1 tapitrisa, izay Tutsi ny ankamaroany.
Vesatra anankifito no iampangan'ny Tribonaly Heloka Bevava Iraisampirenena misahana an'i Rwanda (ICTR) an'i Kabuga tamin'ny taona 1997 ka ao anatin'izany ny fandripaham-bahoaka (genocide), firaisana tsikombakomba hanao fandripaham-bahoaka, fandrisihana mivantana sy ampahibemaso hanao fandripaham-bahoaka, sy ireo heloka bevava notontosaina tao Rwanda nanomboka ny 6 Avrily ka hatramin'ny 17 Jolay 1994.
Nofintinin‘ilay mpanora-gazety Moutiou Adjibi Nourou ireo vesatra mianjady amin'i Kabuga:
Voampanga izy ho nanangana ny Interahamwe (‘mpiaramiady’), izay milisy Hutu heverin'ny Firenena Mikambana ho tana-nandripaka nahafaty olona 800.000 tamin'ny taona 1994.
Namoahana taratasy fampisamborana iraisampirenena, Félicien Kabuga no filohan'ny Radio Télévision Libre des Mille Collines [RTLM], izay nanely ireo antso hamonoana izay rehetra Tutsis taorian'ny famonoana ho faty ny Filoha teo aloha Juvenal Habyarimana. Izy ihany koa no nitarika ny Vatsim-Piarovam-Pirenena [FDN] nanangona ‘vatsy’ hamatsiambola ny fampitaovana sy fitaovam-piadian'ny milisy ary voalaza fa ‘nanome baiko ny mpiasa ao amin'ny orinasany (…) hanafatra kalaza maro dia maro alefa ho ao Rwanda tamin'ny taona 1993,’ talohan'ny nitsinjarana bazy ireny tamin'ny Interahamwe tamin'ny Avrily 1994.
Kitro nifaharan'ny fandripaham-bahoaka indrindra ny RTLM. Nanambara i Sandra Ngoga, mpiofana ho mpanadihady ao amin'ny Oniversiten'i Sherbrooke :
Nandritra ny 100 andro nisian'ny fandripaham-bahoaka, isan'andro ny RTLM no nandrisika ny vahoaka Hutu ‘hanao ny asany’, voambolana nanondroana ny famonoana ny Tutsis. Ankoatra izany dia nanana ny anjara toerana lehibe tamin'ny fandripaham-bahoaka ireo mpanentana satria ry zareo no mampahafantatra amin'ny olompienena ny anarana sy ny toeran'ireo Tutsi niharam-boina sy nandrisika ny mponina hanatanteraka haingana ny asany. Heverina ho nandray anjara tamin'ny fahafatesan'olona maro dia maro ny RTLM.
Taoriana kelin'ny fandripaham-bahoaka, mpanora-gazety maro niasa tamin'io tobim-pampielezam-peo io no voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny fandripaham-bahoaka sy ny heloka bevava namelezana ny zanak'olombelona.
Vita hatreo tao anatin'ny fihibohana mifandraika amin'ny COVID-19 tao Frantsa ny fiafenan'i Kabuga. Voatsonga eto i Eric Emeraux, mpitarika ao Frantsa ny Ofisy foibe Iadiana amin'ny Heloka Bevava atao amin'ny Zanak'Olombelona (OCLCH) :
Herintaona izay no nanomboka ny hazalambo nandritra ny fivoriana tao La Haye teo ambany fitantanan'ny IRMCT [lapan'ny fitsarana]. Samy nanara-maso ny havany mitoetra any amin'ireo firenena onenany avy ny polisy Belza, Britanika ary Frantsay. Nifantohan'ny polisy frantsay ny fonenana iray izay matetika tsidihan'ny fianakavian'i Kabuga. Tamin'ny fampiasana fanarahamaso elekitronika nandritra ny 365 andro, hitan-dry zareo fa misy zanak'i Kabuga iray hatrany [11 ny isan'ny zanany] monina ao amin'io fonenana io. Karazana porofo ihany izany ho anay fa ao ralehilahy, saingy tsy mbola natoky izany tanteraka izahay mandra-panosikay ny varavaran'ny efitra fandriany. Mety ho natoky tsara izahay raha nahita azy nivoaka, saingy nipirina tanteraka izy ary nitoka-monina tao an-tranony. Anarana hosoka amin'ny pasipaorom-pirenena afrikana iray no niainany … Anaram-piafenana 28 rahateo raha atambatra no nifanolosoloany nandritra ny 26 taona.
Nisy niaro ve i Kabuga?
Na dia maro aza ireo mpikatroka nankalaza ny fisamborana an'i Kabuga, manontany tena kosa ny sasany amin'ny nahafahany nandositra ny fitsarana nihoatra ny ampahaefan'ny taonjato. Mila tsy hahita izay hotenenina i Alain Gauthier, filohan'ny firaisankinan'ny mpitory ho an'i Rwanda (CPCR) amin'izay mety ho firaisana tsikombakomba nahafahany niditra ny sisintany frantsay.
Araka ny vaovao tselatra navoakan'ny Agence France-Presse, efa nangataka tamin'ny biraon'ny fampanoavana tao Nanterre [tanàna akaiky an'i Paris] ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina the Rwandey ao Frantsa (CRF), hanokatra famotorana hamantarana izay nanampy an'i Kabuga.
Mpikatroka sy mpanora-gazety maro ihany koa no efa nanontany tao amin'ny Twitter.
Mampahatsiahy i Ida Sawyer, tale lefitry ny Human Rights Watch misahana an'i Afrika:
#Rwanda: Tamin'ny fanamarinana fa efa maty tokoa ilay Augustin Bizimana heverina ho mpandripa-bahoaka, andro vitsy monja taorian'ny nisamborana an'i Félicien Kabuga tao Frantsa, tsy maintsy miezaka bebe kokoa isika mba ho alefa eny amin'ny fitsarana i Protais Mpiranya, ilay lehibe farany mbola tafandositra.
Manoratra i Nadia Kabalira:
Nodidian'ny Fitsarana Ambony ao Paris ny hamindrana an'i #FélicienKabuga ho any amin'ny @unirmct. Tsy isalasalana fa holalaoviny ny fizotram-pitsarana ka handeha ho any amin'ny Fitsarana Tampony izy. Ny mahatsikaiky, io fitsarana tampony io no fahefana ara-pitsarana sy ara-maoraly faratampony ka any i Kabuga no hametraka ny fampakarana raharaha tsy ara-maoraly.
Mikonaina ny LUCHA, fikambanana fiarahamonim-pirenena sady mpandala ny zon'olombelona ao Repoblika Demaokratikan'i Congo:
Nahiahiana sy nokarohina ho nanao fandripaham-bahoaka sy heloka bevava nahatra tamin'ny zanak'olombelona, ilay Rwandey Felicien Kabuga nonina tao Frantsa tamin'ny pasipaoro Kôngôley!
Nanoratra i Nicolas Berrod, tanora mpanoratra ho an'ny gazety frantsay Le Parisien:
Mpifanolo-bodirindrina an'ilay ‘mpamatsy vola ny fandripaham-bahoaka Roandey’, Félicien Kabuga, ao Asnières-sur-Seine no miteny hoe: ‘Mahagaigy. Mbola tsy mino foana. Tahaka ny hoe mpifanolo-bodirindrina tamiko i Hitler na i Klaus Barbie.’
Ho tratra ny rariny, hoy ny fehintenin'i Laurent Larcher, mpanora-gazety miaraka amin'i La Croix, sady mpanoratra ny boky “Rwanda, ils parlent – Témoignages pour l'histoire.” [Rwanda, miteny ry zareo – Fijoroana vavolombelona hijoroan'ny tantara] :
Mizotra amin'ny lalany ny fitsarana [rariny], tsy ho tafa ny heloka bevava. Mbola misy hatrany ny fotoana hitazonana ny olona iray ho tompon'andraikitra tamin'ny safidiny, tamin'ny nataony ary tamin'ny heloka bevava vitany. Ary hanao izany eo anoloan'ny zanany izy